Abuur ficillo Photoshop ah si aad waqtiga ugu ilaaliso nidaamka tafatirka | Abuurista khadka tooska ah
Cfalalka dambe ee Photoshop badbaadin Waqtiga hawsha tifaftirka waa fikrad aad u wanaagsan markaan yeelano sawiro aad iskula mid ah oo aan dooneynoku dabakh qaab isla tafatir ah iyaga Photoshop. Waxqabadyada ayaa noo oggolaanaya abuuro saameyn gaar ah oo hadhow saameynadan ku dabakho sawir toos ah. Waan awoodnaa download saamiyada internetka ama si fudud Abuur ficilkeena daabacadaha mustaqbalka.
Haddii aad ka daashay ku celcelinta wax ka beddelka sawiradaada marar badan, waxaan kugula talinayaa inaad bilowdo adeegsiga ficilada Photoshop waayo, waqti badbaadi oo joojiso caajiska adoo ku celcelinaya isla arintaas marar badan. Waxaan ka heli karnaa sawir in kadib markii aan codsanno ficil uusan aheyn sida saxda ah ee aan dooneynay maaddaama iftiinka, hoosku, midabka ... iwm ay ku kala duwanaan karaan haddii tani ay ku dhacdo ficil dhibaato ma noqon doonto maxaa yeelay Photoshop wuxuu noo ogolaanayaa mar haddii tallaabada la adeegsado, wax ka qabashada xulashooyinka dib u soo celinta.
Waxa ugu horeeya ee ay tahay inaan sameyno ficil samee furitaanka liiska waxqabadka gudaha Photoshop, haddii ay qarsoon tahay, waxaan ka saari karnaa liiska / daaqadda / ficillada.
Waxaan fureynaa liiska waxqabadka waxaanna abuureynaa ficil adigoo riixaya ikhtiyaarka ficil ee cusub.
Marka aan helno ficilka la abuuray, waxa xiga ee ah inaan sameyno waa inaan siino ikhtiyaarka duubista bilow (falalka menu) laga bilaabo xilligan oo dhan hababka waxa aan sameyno ayaa sii joogaya ka diiwaan gashan ficilkeena. Waxaan dalban karnaa qalooca, isbedelka midabka, heerarka ... dhamaan dib u hagaajinta lagama maarmaanka u ah sawirkeena.
Sawirka hoose waxaan ku arki karnaa sida ficilka la abuuray u diiwaan gelinayo mid kasta oo ka mid ah isbedelada lagu sameeyay sawirka waxaana laga yaabaa xitaa inuu qariyo qaar ka mid ah howlahaan.
Si aan u dhammeyno waa inaan joojinaa duubista/jooji duubistan (waxqabadyada menu) marka falka la joojiyo, waan badbaadin karnaa muuqaalkeena.
para ku dabaqo ficilkeena cusub sawirrada mustaqbalka waa inaan ku furnaa sawirka Photoshop oo aad bilowdo ficilka adoo riixaya ikhtiyaarka lagu fulinayo xulashada (menu menu).
Ficillada waxaad ku badbaadin doontaa waqti sawirradaas oo isku mid ah, Hubinta in hannaanka tafatirka uusan u noqon mid soo noqnoqda. Sidoo kale waad keydin kartaa tafatirka gaarka ah hana iloobin talaabooyinka aad raacday ee noocaas ah wax ka beddelka. Soo degsashada iyo adeegsiga ficilku wuxuu khuseeyaa isla sidii aan ku aragnay qeybta ugu dambeysa boostada.
Wadada buuxda ee maqaalka: Hal-abuurka internetka » General » Tababarada » Abuur ficilo Photoshop si aad waqtiga u ilaaliso